Noqo diiwaanhayaha .SO – Somali Network Information Center
Noqo diiwaanhayaha .SO
Waxaa jira laba siyaabood oo aad ku siin karto .SO diiwaangelinta domain ee macaamiishaada:
1. Noqo iibiye
Tani waxay ka dhigan tahay inaad adeegsan doonto adeegyada ay bixiso mid ka mid ah diiwaaniyeyaasha oo aad sameysatay koontada iibiyaha. Tani badanaa waa hab sahlan oo lagu bilaabi karo .so domain macaamiishaada.
La xiriir diiwaan-hayaha si aad u ogaatid haddii ay bixiyaan shaqeysiinta iibiye.
2. Noqo diiwaanhaye la aqoonsan yahay
Noqoshada diiwaan-hayaha la aqoonsan yahay wuxuu u baahan yahay xisaabin, masuuliyado iyo maalgashi balaaran. Doorashadani waxay u fiican tahay ganacsiyada doonaya inay si dhab ah uga qaybqaataan khadka DNS iyo shabakadda internetka.
Tallaabooyinka guud ee lagu noqdo diiwaan-hayaha:
Nagala soo xiriir (support@sonic.so) si aad u diyaarsato una fuliso Heshiiska Diiwaangelinta Diiwaangeliyayaasha
Buuxi foomka qaabeynta
Maalgalinta xisaabtaada adoo adeegsanaya fiilooyinka lacag bixinta (ugu yaraan bilawga dheelitirka $1,000)
Aqoonsiga shahaadooyinkaaga si aad u bilowdo diiwaangelinta domains